Tahabshiil Iyo Delesom Dulin Dadka Ku Nool. | Saxil News Network
Tahabshiil Iyo Delesom Dulin Dadka Ku Nool.
February 22, 2016 - Written by admin
Tahabshiil iyo delesom waa xidhiidhiyaha kaynta uu boqorka ka yahay Maroodigu, waa qalbiga boqorka, waa khasnada kaynta, waxaa ay qaabilsan yihiin quudinta Habar-dugaag oo aan waxba ka faa’idin dhibaato iyo dulmi mooyee, waa awooda kaynta ay ku noolyihiin Habar-dugaag oo cidwalba leh, laakiin Habar dugaag ma damqadaan waayo? Tahabshiil iyo Delesom waa Aarka iyo Goosha Kaynta oo iyagu ka awood badan boqorka kaynta ee Maroodiga.
Aarka waxaa ay habeen wada dhasheen Maroodiga Boqorka Kaynta, Gooshuna waa habeen dhaxa Aarka iyo Maroodiga.Aarka oo ay boqorka kaynta habeen wada dhasheen waa libaax aad u weyn oo micidiisu meel walba jarto, laakiin Goosha oo habeen dhax isku yihiin Maroodiga oo ah boqorka Kaynta waxaa ay ugaadhsataa marka ay ciyaalkeedu gaajo dareemaan oo aanay Habar-dugaag u kala eegin yar iyo weyn, wax manfacleh iyo ku aan laheyn, waa laayaan ay Habar-dugaag in badan ku tashadeen inay kaynta uga tagaan.
Aarka iyo Goosha oo aan is qabin balse tartama waxaa ay ku noolyihiin Habar-dugaag oo ay maalinba mid quutaan.Magaalo madaxda Kaynta Habar dugaag waa gobolka Jilba yare gaar ahaan magaalada Diinqal.
Magaalada Diinqal waxaa ka taliya Aarka iyo Goosha balse waxaa ka jirta Xukuumada Maroodiga oo iyada Habardugaag doorteen.Habar dugaag kama warhayo musdambeedka Boqor Arbe oo hadii aan idiin sheego ah Aarka iyo Goosha (Tahabshiil iyo Delesom) waa hagayaasha gaadhiga Arbe Wado oo isagu sawirka u buuxiya Aarka iyo Goosha si aanay Habar dugaag ugu tashan islamarkaana uga kicin kursiga boqortooyada.
Baliyadii, geedihii, iyo noloshii Habar-dugaag waxaa ay gacanta u gashey Aarka iyo Goosha, Iyagu kama xishoodaan waxaa liita oo idin la nool Habar-dugaag oo la idiin qabsan mayo maalinta Xisaabta, Maxaa ka galay? Iyagaaba kaynta haysta.
Guushaasi waxaa u saaciday Aarka iyo Goosha, Arbe oo boqor ka ah Kaynta islamarkaana ay iyagu in badan caawiyeen markii uu doonayayn inuu kaynta Boqor ka noqdo.
Arbe waa Maroodiga Lab waana Boqorka kayntan ay haystaan Aarka iyo Guushu waxwalba uu ka maqlaa labadan Dulin ee Habar dugaag ku nool, Sababtoo ah waa maqalka kaynta waa furaha boqortooyada Habar dugaag.
Maalin maalmaha kamida waxaa si qarsoodiya iskugu yimid Habar dugaag oo u qaadan waayey dulmiga iyo boobka ay kaynta u gaysteen Aarka iyo Goosha islamarkaana uu ku eegayo Boqorkan Arbe ee ay Hogaanka u dhiibteen.
Shirku waa qarsoodi Labadii Dulin Aarka iyo Gooshu midna ma joogo Shirka, Arba-na waxaa isaga qancisay xarunta Boqortooyada Habardugaag oo uu ku shirinayo qaar kamida maamulka kaynta ee taabacsan.
Habardugaag noloshii baa ku adkaatay ceelashii madhe, dhulku baad maleh, roob kama di’in kaynta, waxaa ay la taabalaysanyihiin xanuunada ay ka qaadeen geedo aan manfac laheyn oo kaynta ay ka beereen Aarka iyo Gooshu si ay xidhiidh ugu sameeyaan Habardugaag oo noloshii ku adagtahay.
Shirkii Habar dugaag dhamaade qodobo laga soo saar, aynu is dhaafino Aarka iyo Goosha la isla qaaday.Dacawo oo qayb ka ahayd shirka Aayo ka tashiga ayaa khiyaantay Habar dugaag oo u warantay Musdambeedkii Boqortooyada Habardugaag.
Aarkii iyo Gooshii way ogyihiin nimcada ay ku qabaan Habardugaage waxaa ay markiiba shir degdega la yeesheen Arbe hogaamiyihii Kaynta.Habardugaag lakala wada furfur, midba dhinaciisa loogu sheeg inuu ka kale ka weyn yahay, dhabarka lawada taabay, Kayntii lawada kala shaki mid waliba gooni isu taag, sidiisana wax u doonay.
Aarka iyo Gooshu Hawshooda way iska wataan maalinba khad cusub Habardugaag ha u keenaan, Bil amaan hawshooda, dabadeed wada qaaday, isticmaal, lama yaqaan waxani halkay ka yimaadee, Maalintii dambe magacyadoodii oo afran, hooyadii iyo waxwalba oo laga heli karo laga diwaangali.
Kayntii imika waxaa haysta Aarka iyo Goosha waxaanu u guulwadeeya Arbe.Geedihii kaynta laga beeray xanuuno laga qaad, Habardugaag madhe, ka hadal isyidhaa laga xanib xidhiidhiyihii, loo yeedh, la xidh, jeelkana cidi kama soo dayso, lagu Ilaab, Dhinte, waar hebelkii Waraabe Mee? Mooyi mooyi mooyi!!!!!
Kaynta imika waxaa saameysay Abaar sidii aynu hore usoo sheegnay, cid u gurmatay ma jirto,Habardugaag waxaa noloshii ku adkeeyay Hawo ay Aarka iyo Gooshu ka kireeyeen.
Kayntii noloshii aad bay u liidata, Adeedyadii kale dhaaf, waxaa Habardugaag ku adkaatay sidii ay biyo u heli lahaayeen,Kaynta maqalkeedii kuwii ku noolaa kama naxayaan, maxaa ka galay? Waxba kama galin!!!!!
Aarka iyo Goosha siday doonaan ayay imika kaynta u maamulaan waxay doonaanbay sameeyaan, iyagu way ladanyihiin waxay kaynta kaga noolyihiin cariishyada ugu sareeya, waana maamulada qarsoon ee kaynta nagu haysta, waxwalba waxay kaga dareen goolaftan,cabudhinta,indho adkaanta IWM.
Habardugaag Imika ma haystaan cid ciirsiya Arbe waa ka seexday oo isagiibaa tabcaan ah laakiin Aarka iyo Gooshu (Tahabshiil iyo Delesom)waa dulin Habardugaag ku nool.
Fiiro Gaara: Tabahshiil waa Aarka, Delesom-na waa Goosha.